DAAWO:Taliyaha Ciidanka Booliska Somaliland Oo Maanta Hortagay Golaha Wakiilada. |
DAAWO:Taliyaha Ciidanka Booliska Somaliland Oo Maanta Hortagay Golaha Wakiilada.
Hargeysa (GNN)-Taliyaha Ciidanka Booliska Jamhuuriyada Somaliland sareeye Guuto Cabdillahi Fadal Iimaan ayaa maanta kulan la yeeshay guddida Arrimaha gudaha ee Golaha Wakiilada Somaliland oo ugu yeedhay xafiiskooda magaaladda Hargeysa.
Kulankani markii uu dhammaaday waxa warbaahinta si wada jir ah ula hadlay Taliyaha Ciidanka Booliska Somaliland Sareeye Guuto Cabdillahi Fadal Iiman iyo gudoomiye ku-xigeen guddida difaaca qaranka iyo arrimaha bulshada ee golaha wakiilada Bashiir Tukaale.
“Waxa Guddidu u yeedhay oo ay su’aalo ka waydiisay Taliyaha Ciidanka Booliska xaalada guud ee nabad galyada waddanku halka ay marayso,”ayuu yidhi Md. Bashiir Tukaalle.
“Gudidaa ayaa ii yeedhay waxaanu wax isk waydiinay xaaladda guud ee nabad galyada dalka. Nabad-gelyadda dalku caam ahaan aad iyo aad ayay u wanaagsan tahay. Wixii ay na weydiiyeen oo dhan-na waanu uga jawaabnay,”Ayuu isna yidhi Taliyaha Booliska Somaliland.